काठमाण्डौ बाहिरबाट आउने सवारीसाधनका लागि यस्तो नियम लागु हुँदै ! – " सुलभ खबर "
काठमाण्डौ बाहिरबाट आउने सवारीसाधनका लागि यस्तो नियम लागु हुँदै !
सरकारले काठमाडौँ भित्रने सवारीसाधनले धुलो र हिलो भित्र्याएको भन्दै सरकारले काठमाडौँ भित्रिन सवारीसाधन धोई पखाली मात्रै उपत्यका प्रवेश गराउने भएको छ । सवारीसाधन धुने ठाउँ (वासिङ सेन्टर) को निर्माण भएपछि उपत्यकामा सवारीसाधनले भित्र्याउने फोहर कम हुने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।
उपत्यका भित्रने निजी र सार्वजनिक सबै सवारीसाधन केन्द्रमा धोएर मात्रै उपत्यका छिर्ने व्यवस्था मिलाइने विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विभागले अहिले धादिङको विभिन्न स्थानमा जग्गा खोजी गरिरहेको छ । उपयुक्त जग्गा भेटिनासाथ केन्द्र निर्माण शुरु हुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “पटक पटक धादिङ पुगेर हेरिरहेको म आफैँ हेरिरहेको छु ।”
अहिले झण्डै पाँच–छ ठाउँमा जग्गा हेरिरहेकामा उपयुक्त स्थान छनोट हुने बताइएको छ । यसले गर्दा सवारीसाधनका कारण हुने धुलो र हिलो कम हुने विश्वास गरिएको छ । उपत्यकाबाहिरदेखि आउने सवारीसाधन मात्रै नभएर उपत्यकाभित्रै गुड्ने सवारीसाधनले समेत उपत्यकाका सडक फोहर बनाइरहेको महानिर्देशक हमालले बताउनुभयो ।
काठमाडौँ उपत्यकाका सडक धुलो र हिलोका कारण उपत्यकावासी हैरान छन् । काठमाडौँ महानगरपालिका, ललितपुर मानगरपालिका, सडक विभाग लगायतले सडकको धुलो सफा गर्नका लागि यान्त्रिक कुचो (ब्रुमर) सञ्चालन गरिरहेका छन् । सवारीसाधनबाटै भित्रने फोहर, निर्माण सामग्रीलगायतले दैनिक फोहर भित्र्याउँदा सडक धुलो र हिलोमुक्त भने बन्न सकेको छैन ।
नयाँ चालकले जान्नैपर्ने : उकालोमा कार बिस्तारै चलाउनु पर्दा र रोक्नु पर्दा के गर्ने
काठमाडौं । भनिन्छ, नेपालको बाटोमा गाडी चलाउन सक्नेले विश्वको सबै ठाउँमा सजिलै गाडी चलाउन सक्छ
काठमाडौं । मानौं तपाईं बसमा काठमाडौंदेखि बिरगञ्जको यात्रामा हुनुहुन्छ । गाडीमा स्टाफले भोजपुरी फिल्म चलाइदिन्छ
कोरोना भाइरसलाई खाने सूक्ष्म जीव भेटाइएको वैज्ञानिकको दाबी !
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारी अहिले सारा विश्वमा नै व्याप्त छ । कोरोना भाइरसका कारण
विद्यार्थीलाई सस्तोमा इन्टरनेट उपलब्ध गराउने टेलिकमको घोषणा, कुरागर्न पनि धेरै सस्तो
काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना २०७७’
वैज्ञानिकहरुले पत्ता लगाए नयाँ कुरा, कोरोना संक्रमण भईसकेपछि संक्रमितको दाँत झर्न शुरु
खुसीको खबर:घट्यो खाना पकाउने ग्यासको मूल्य हेर्नुहोस्